Umshwelezi uNelson Mandela kusho uRaymond Louw
Ukudla kanye nabafazi balabo abambopha
Kuthatha imfanelo ethile ekhethekile yomuntu owachitha iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa yokuboshwa kwakhe etilongweni, isisulu sesimiso esibi esenomgomo wokugcina yena nabantu bakhe behlupha ebugqilini obungapheli, ukujabulisa abafelokazi nabafazi balabo abambopha edla nabo isidlo sasemini.
Yilokho uMongameli waseNingizimu Afrika uNelson Rolihlahla Mandela akwenzile, eminyakeni emihlanu emva kokuba kuvulwe iminyango yejele futhi waphuma indoda ekhululekile, kamuva ephakanyiselwa ehhovisi eliphezulu kakhulu kulelizwe kulokho okuchazwe njengokhetho oluyisimangaliso.
Ukuxhumana Okumnyama Komphakathi - Akukho Okukhona
Eminyakeni embalwa ngaphambili laba besifazane bekumele babonakale bemi ngokuqinile ngaphandle kwabesilisa njengoba bebeka ubuhlanga obuhle ababenzile ngaphansi kwesigqila somgomo wobandlululo - uhlelo olukhulu lokuphoqelela iningi labantu abayizigidi ezingamashumi amane ukuba libe ngaphansi kwamandla,ngaphansi imithetho esebenzayo yensimbi eyenziwe yisiwe sabantu abayizigidi ezintathu esibusayo samabhunu.
Ukuxhumana kwabantu besifazane nabantu abamnyama baseNingizimu Afrika kwakungekho - nakuba beyeka ukuzulazula izandla zababhalisi abamnyama bangaphandle ngenxa yokuthi bawela ekilasini labantu "bamazwe ngamazwe". Abantu abamnyama baseNingizimu Afrika babegubha izinkuni nabadwebi bamanzi, bafanelwe kuphela imisebenzi emincane eyenziwe yizinqubomgomo abayeni babo ababezicebile. Ngaleso simo kwahamba ngezinga eliguqukayo lokunakekela izingane.
Futhi uma abantu abamnyama abazange baziphathe noma bazivumelanise njalo kwakuvinjelwe, ukuboshwa kwendlu, ukuthunjwa, ijele noma ukufa. UMongameli Mandela ngokwakhe wayebekezele cishe isigamu sokuphila kwezinye zalezi zijeziso.
Umfelokazi oyedwa kuphela owenqaba isimemo isimemo semini. Umyeni wakhe, uDkt. Hendrik Frensch Verwoerd, wayengumdwebi omkhulu wobandlululo ngaphambi kokuba abulawe isithunywa sePhalamende esiyinkimbinkimbi ngo-1966.
Wayenguye owachitha ukuphila kwakhe omdala esebenzisa izindlela ezihlukumezayo nezindlela abakwa-Afrikaner Nationalists abangazenza ngayo izwe futhi usebenzise ukucabanga kwabo ngokohlanga ngokobuhlanga obomhlophe abahlala emadolobhaneni ahlukanisiwe ngenkathi bevuna izinzuzo kanye nokuphila okunethezeka okwenziwe ngumsebenzi ophansi wamanani omnyama.
Ngenkathi eneminyaka engu-94, uNkosikazi Betsie Verwoerd wancenga ukuthi ukugula kwamvimbela ukuba angene ePitoli kodwa, njengendoda endala, wanciphisa ukwenqaba ngesiphakamiso sokuhleleka ukuthi uzojabula ukuhlangabezana noMongameli uma edlula. Lokhu kusho ukuthi uMongameli kufanele ahambe amakhilomitha angaba ngu-100 ukusuka ku-Orania e-Karoo enomhlabathi ophezulu enyakatho yeKapa, ​​lapho amabhunu athengile khona umhlaba futhi aqale ukusungula idolobha "labamhlophe kuphela ".
Ngalolu hlelo, amakhaladi (abantu abaxube abaxubile) ababehlala lapho baxoshwa. Ekukhanyeni kwalo mlando nokulahlwa konke okusemnyama - ezimweni ezintsha zeNingizimu Afrika yentando yeningi, izinqubomgomo ezishibhile zomsebenzi wobandlululo kwakufanele zibikezele futhi wonke umuntu uzokwenza umsebenzi wakhe ngisho nokuhlanza amanzi kwakuncane kakhulu Ukulindela ukuthi uMongameli Mandela uzobiza.
UMandela uvakashela u-Orania
Kodwa lokhu kwakungekho ukucubungula uMongameli owayengamjabulisa umfelokazi weNdunankulu wangaphambili u-John Balthazar Vorster.
Kwakukhona njengoNgqongqoshe Wezobulungiswa ukuthi uVorster wafanisa ukuzithokozisa kukaVerwoerd ngokufaka imithetho yezinto ezicindezelayo, ngaphandle kwezimpawu zabo ezihlukumezayo, cishe zashintsha uMongameli Mandela kanye neziboshwa ezikanye nabo kubantu abangewona abantu.
UMongameli Mandela wehlela e-Orania, wayephuza itiye kanye ne-koeksisters (uhlobo oluthile lwadonut) noNkosikazi Verwoerd nangesandla ehlombe lakhe futhi ehleka emlonyeni wakhe, echazwe ngesiBhunu ngamazwi njengoba ehluleka ngenkathi efunda incwadi wayeqalile.
"Ngicela uMongameli ukuba acabangele iVolkstaat ngesihawu futhi alahlekelwe isiphetho sabaseAfrika ngokuhlakanipha," incwadi yakhe ifundwa. Wayekhuluma ngesidingo samabhunu ukuba banikezwe "isizwe sabantu" sabo lapho bazosebenzisa amandla ngaphandle kokuphazanyiswa iningi. Kwakuyindlela encane yokufuna ukusekela i-apartheid yabo lapho bezokwazi khona ukuqhubekisela phambili inqubomgomo, kanti bonke abazungezile intando yeningi eNingizimu Afrika bazoqhubeka nokubhubhisa yonke imigomo yenqubomgomo ehlosiwe.
UMongameli Mandela wabonakala engenakulungiswa yizinto ezibonakalayo zobandlululo - njengobonakaliso "obunqunu" emnyango wesigodi, isithombe seVerwoerd saso "Ngibonise indlela" ukubonakaliswa nokungabikho kobuso obumnyama ezweni lapho abamnyama khona kukhona iningi emadolobheni amaningi. Wayekhipha imibuzo mayelana nesitayela esithi "abamhlophe kuphela" ngokusho ukuthi wayengazange adingeke ukuba acele imvume yokuvakashela. Kwakuwumzamo ohlolwe ukuzama ukukhipha isibindi.